Maxay Tahay Sababta Mooskan Loogu iibsaday $120,000 oo dollar? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan — December 7, 2019
Sida ay qorayaan warbaahinta Mareykanka, Sawirka moos sharooto lagula dhejiyay gidaar oo farshaxaniste uu sameeyay ayaa lagu iibiyay $120,000 oo dollar. Waxaa lagu soo bandhigay xarunta farshaxanka ee Miami ee dalka Mareykanka.
Laba ka mid ah seddaxda qeyb ee farshaxanka ayaa la iibiyay, sida ay sheegtay Perrotin, oo ar laanta sida ku meelgaarka ah u maamuleysa farshaxankan. Midka ugu dambeeya waxaa la filayaa in $150,000 oo dollar lagu iibiyo.
Farshaxanka oo muran dhaliyay oo lagu magacaabo “majaajiliiste”, waxaa sameeyay Maurizio Cattelan oo u dhashay Taliyaaniga kaas oo sannadkii 2017-kii sidoo kale sameeyay farshaxanka la wada jeclaaday ee loogu yeeray “Mareykan” oo ahaa fadhiga musqul dahab ah.
Balse farshaxankaas oo qiimihiisu ahaa $6 milyan oo dollar, waxaa laga xaday qasriga Blenheim ee London, xagaagii la soo dhaafay.
Illaa shan qof ayaa tan iyo markaa ka dib loo xiray arrimo la xiriira xatooyada. Abaalmarin ayaana lagu bixiyay soo celinta mashqushaas, in kastoo weli aanan la soo helin.
Emmanuel Perrotin, aasaasaha farshaxankan wuxuu warbaahinta CBS ee Mareykanka u sheegay in shaqada Maurizio aysan ku koobneyn walxo oo keli ah, balse waa sida walxahaas ay daafaha caalamka ugu kala gudbaan.
“Haddii gidaar lagu sawiro ama haddii lagu daabaco bogga hore ee wargeyska New York Times, farshaxankiisa wuxuu nagu qasbaa in aan isweydiino waxa uu yahay qiimaha aan alaabta ku bixino,” ayuu yiri.
Wuxuu intaa ku daray in “sawirka uu aad uga duwan yahay mooska.”
Kuwa dhalleeceynaya waxay ku doodayaan in farshaxanka uu si wanaagsan u matali karo waxa artiska dunida uu noqday ee ah arrinta lagu tilmaami karo farqiga sinnaan la’aanta dhaqaale ee jirta. Sidoo kale waxaa jiro dad doortay in aysan si wayn u amaanin sida fudud ee farshaxanka uu u taagan yahay.
Ninka sameeyay sawirka wuxuu fikradda la yimid sannad ka hor. Wuxuu “ka fakarayay sameynta farshaxan loo ekeysiiyay moos,” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay Perrotin.
“Markasta ee uu safro, wuxuu la soo noqdaa moos wuxuuna suraal qolkiisa si uu uga helo dhiiragelin. Wuxuu sameeyay dhowr nooc: Markii hore wuxuu sameeyay mid dareere ku dhex jira, ka dibna mid naxaas ah. Ka dibna mid adag oo la rinjiyeeyay. Markii ugu dambeysayna wuxuu la yimid fikradda ah moos dhab ah.”
Farshaxanistaha ma uusan siinin tilmaamo rasmi ah dadka iibsaday ee ah in uu mooska bololi doono iyo in kale. Wargeyska The Miami Herald wuxuu ku warramay in dadka leh mooska ay bedelan karaan haddii loo baahdo.
Ka hor intaanan la iibinin, Emmanuel Perrotin, wuxuu CNN u sheegay in mooska uu yahay “astaanta ganacsiga adduunka, in uu dalxiiska ku lamaanan yahay iyo in uu yahay wax madadaalo fiican ah.”
Wuxuu intaa ku daray in farshaxankan uu noqday wax la socda “gaariga farxadda iyo dhalleeceynta” labaduba.
Tags: 000 oo dollar?Maxay Tahay Sababta Mooskan Loogu iibsaday $120
Next post Maxaad Ka Taqanaa Fitamiinka Laga Helo Qoraxdda?
Previous post Maxaa Sababo Xinjirow La’aanta Dhiigga (Hemophilia)?